एमालेको पुरानो स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी : पुर्व माओवादी अन्यौलमा ! - Kantipath.com
एमालेको पुरानो स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी : पुर्व माओवादी अन्यौलमा !
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरेका छन् । एमालेको २०७५ जेठ २ गतेसम्म कायम रहेको कमिटीको बैठक बोलाउने तयारी भएको हो । जेठ ३ गते नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा(एमाले) भएकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनेको थियो । बैठक बोलाउने तयारी भएको स्थायी कमिटी सदस्य सुवासचन्द्र नेम्वाङले जानकारी दिए । “आह्वान नै त भइसकेको छैन तर, बोलाउने तयारी भइरकेको छ,” नेम्वाङले भने ।
नेपालले नयाँ पार्टीका तयारी गरेपनि उनको समूहका दोस्रो तहका नेताहरुले भने एमाले छाड्न नहुने मत राखिरहेका छन् । बैठक राख्ने तयारी स्वरुप एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेलले आज उपाध्यक्ष बामदेव गौतमसँग भेट गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षसहितको स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेको चर्चाबीच उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले नेता विष्णु पौडेलले नेता वामदेव गौतमसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।
गौतमको निजी सचिवालय स्रोतले दुई नेताबीच भेट भएको पुष्टि गरे पनि विषयवस्तु खुलाउन चाहेन। ‘उहाँहरू छिमेकी हुनुहुन्छ, त्यस्तो कुनै विषयवस्तुकै लागि मात्र नभएर पनि भेटघाट गर्नुहुन्छ,’ गौतमको सचिवालय स्रोतले भन्यो। एमालेका साविक उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले यसअघि माधव नेपाल पक्षले नयाँ पार्टी खोले साथ दिने घोषणा गरेका थिए।
उपप्रधानमन्त्री पौडेलले नेता गौतमलाई भैंसेपाटीस्थित गौतमकै निवास पुगेर भेटेका हुन्। विष्णु पौडेलसहित ओली पक्षका दोस्रो तहका नेता एमालेका दुई पक्षको मिलन गराउन प्रयासरत छन्। केही दिनअघि मात्र सर्वाेच्च अदालतले एमालेको दसौं महाधिवशेन आयोजक कमिटी आधिकारिक संरचना नभएको अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ओलीलाई धक्का लागेको छ। ओलीले पुर्व एमालेको स्थायी कमिटी बैठक राख्न थालेपछि एमालेमा गएका माओवादी नेताहरु भने अन्योलमा परेका छन् ।
Previous Previous post: विश्व रक्तदाता दिवस : ४० हजार युनिट रगत खपत
Next Next post: दलित पत्रकार संघका उपाध्यक्ष पोर्तेललाई पितृशोक